Pneumo 23 wokugoma polyvalent Pneumococcal. Sebenzisa-ke njengoba isilinganiso izifo ukuze avimbele izifo Pneumococcal, kuhlanganise otitis abezindaba, inyumoniya, meningitis, ukucinana kwemigudu yokuphefumula, sepsis (ukuwohloka). Ukugonywa Pneumo 23 ngemva kokuphathwa olulodwa kunomthelela kwetinhlavu asebenzayo amasosha omzimba athile ukuba izinhlobo amabili nantathu serological ka pneumococci e abantu abaneminyaka engama ezimbili. Isikhathi sokuvikela komyalelo wokungabi iminyaka emihlanu. Khipha uhlobo umgomo - umthamo isipetu.
Ukwakheka Pneumo 23 kuhlanganisa iningi serotypes ka pneumococci amelana ne-penicillin. Lapho lokugoma iqembu ingozi kasithupha sinciphise tigameko nenyumoniya.
Ukusebenzisa Pneumo 23 kwamukelekile ngokuhlanganyela lokugoma ngokumelene umkhuhlane, zokuvimbela okuhlangene yezinkinga zayo.
Ikakhulukazi libonisa umgomo:
abantu phezu iminyaka emashumi mathandathu anamihlanu, ikakhulukazi abahlala ezikhungweni, okwakwenza kube lula ukuthola noma ukunakekela asebekhulile ;
iziguli kaningi esibhedlela noma immunocompromised (abaphethwe isifo sikashukela, inhliziyo, nokuvaleka kwemigudu yokuphefumula, futhi ukucinana kwemithambo yomoya emaphashini);
abantu ngotshwala noma umlutha kagwayi;
iziguli ezine-buthakathaka isimiso sokuzivikela komzimba (kokuba kwegazi, iseli isikela, nephrotic syndrome othola splenectomy - ukususwa ubende);
iziguli ukuthi nginesifo "dribble" CSF (cerebrospinal fluid).
Isingeniso Pneumo 23 Kwenziwa phansi kwesikhumba noma intramuscularly. lokugoma Primary Kwenziwa umjovo owodwa ka 0.5 ml. Revaccination (administration okuphindaphindiwe) Kunconywa hhayi ngezikhawu ngaphezu konyaka ezintathu (ngaphandle iziguli engozini noma iziguli ezelashwayo immunosuppressive) futhi olwenziwa umjovo owodwa ka 0.5 ml.
inoculation contraindicated nge hypersensitivity, nokungezwani komzimba nezinto yokubakhona ekuphathweni odlule yokugoma Pneumococcal. Akumele usebenzise izidakamizwa ngesikhathi ezimbili trimesters lokuqala sokukhulelwa. Isicelo zivumelekile ku senyanga lokugcina isincomo udokotela.
Angakugwema yokugoma kumele kube nentuthuko izifo sibi non-esithathelanayo futhi ezithathelwanayo, ukwandisa izinga lokushisa phakathi exacerbation of pathologies ezingamahlalakhona.
lokugoma Pneumococcal bangase baxabane enqabayo obonakaliswe ngezindlela ezingafani.
Ngakho, ngemva nokuphathwa izidakamizwa kungenzeka ububomvu, ubuhlungu, ukuvuvukala noma induration endaweni umjovo. Ngokuvamile, lezi zimpawu simnene futhi esikhathi esifushane.
Kwezinye izimo (ezingavamile kakhulu) kungenzeka ukusabela wendawo ezinzima. Ngokuvamile, lezi zimpawu yilezi esethola futhi akavumi ukuba noma yimuphi umthelela. Ezimweni eziningi ukusabela okunjalo kukhona umuntu kuncike ngamasosha omzimba lokuhlushwa eliphezulu protivopnevmokokkovyh.
Kwezinye izimo, izinga lokushisa likhuphuka (kuya ku-39 degrees) futhi agcinwe izinsuku kusaba emva yokugoma.
Angioedema, urticaria, amawala, akuvamile - ukusabela anaphylactic kukhona imicimbi ezivamile enqabayo ukuthi kungase kubangele umgomo Pneumo 23.
Izibuyekezo abazali, abanezingane, ngesiphakamiso udokotela ukuba khona ukuba bagome izidakamizwa Pneumococcal, okuxubile. Njengomthetho, izikhalazo main ethulwa mayelana izigameko ezingezinhle ezavela elandelayo umjovo. Nokho, ngokusho kongoti, ukubonakaliswa njalo nemiphumela engemihle is kakhulu cishe lihlobene izici of umzimba wengane. Ngaphezu kwalokho, ezimweni eziningi izingane lokugoma azilungile. Ngokusho izincomo lochwepheshe, ngaphambi isingeniso yokugoma kuyadingeka ukulungiselela umzimba wengane. Ukuze wenze lokhu, udokotela angase anikeze isiguli imithi ethile, batusa ukudla okukhethekile kwamasonto amabili kuya kwamathathu ngaphambi ngokugoma.
Kanjani ukulungisa incwadi imali. Incwadi Cash: ugcwalise iphethini
"Mavis" - inkampani ukwakhiwa Petersburg